सडक बोर्डको लगानी उर्लाबारीमा
उर्लाबारी, २० पुस । उर्लाबारी र सडक बोर्ड नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा उर्लाबारी नगरपालिकामा ग्राभेल मर्मतसम्भारका लागि ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरपालिका र जनताको लागत हभागितामा नगरपालिकाबाट यसै आर्थिक वर्षमा योजनामा नपरेका ५ वटा सडक मर्मतसम्भारका लागि सडक बोर्डले उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सडक बोर्ड र नगरपालिकाको साझेदारीमा हुने मर्मतसम्भारका लागि नगरपालिका प्रमुख खड्ग फागोसहितको टोलीमार्फत सडक छनौटको प्रक्रिया शुरू भएको छ । बुधबार नगरप्रमुख फागो, वडा नं. ८ अध्यक्ष कूलबहादुर कार्की, ९ अध्यक्ष बमबहादुर फ्याक, इन्जिनियर रोशन उदासलगायतको टोलीले वडा नं. ८ र ९ का विभिन्न सडक निरीक्षण गरेको छ । उर्लाबारी वडा नं. ८ दुर्गापुरी बजारदेखि मेहेरी टोली हुँदै उर्लाबारी वडा नं. ९ को आमवाडी जोड्ने सडक, छड्के टोल सडक, त्रिवेणी चौक–कट्वाना होली सडकको निरीक्षण गरिएको इन्जिनियर रोशन उदासले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरका अन्य वडामा पनि निरीक्षण गरी प्राथमिकतामा आधारमा ५ वटा सडक प्रस्ताव गरिने छ । नगरपालिका र स्थानीय उपभोक्ताको १७ लाख १५ हजार रूपैयाँ लगानीमा ५७ लाख १५ हजार रूपैयाँमा मर्मतसम्भारको काम गरिने उहाँको भनाइ छ ।
गत वर्ष नेपाल भरिका सडकहरूबाट संकलन भएको करलाई सदुपयोग गर्न बोर्डले उर्लाबारीसहित देशभरका १ सय ९२ नगरको सडक पूर्वाधारमा १ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न लागेको हो । सडक बोर्डले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, शहरी सडक, ग्रामीण सडक पूर्वाधारको लागि कार्य क्षेत्र बनाउँदै आएका छ ।
२०७४ पौष २० बिहीबार ११:१६:०० मा प्रकाशित